Xiaomi saamiyada ayaa kor u kacay 10% maaddaama qaadiga Mareykanka uu qaadayo xayiraadaha - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 15, 2021 0 comments
Saamiyada Xiaomi waxay arkeen boodboodi 25-kii Maarso iyada oo qaadiga Mareykanka uu si kumeel gaar ah u qaaday xayiraadihii uu saaray madaxweynihii hore Donald Trump Xaakimka degmada Mareykanka Rudolph Contreras ayaa qaaday cunaqabateyntii uu saaray maamulka Trump. Wuxuu sheegay in shirkadda Shiinaha la garaacayo haddii gargaar la joojiyo. Ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in Xiaomi ay tahay CCMC, ayuu raaciyay.
Waxaa ku qoran "shirkad millatari oo shuuciya Shiinaha ah" (CCMC), soo saaraha casriga ayaa laga mamnuucay maalgashi. Xiaomi ayaa bilawday dacwad, iyada oo sheegaysa in shirkadda aysan markaas gacanta ku haynin awoodda militariga Shiinaha.
Xiaomi oo ku faraxsan amarkiisa, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay weydiisan doonaan in gebi ahaanba shirkadda laga saaro liiska madow.
Waxay sidoo kale shaacisay shirkadda, iyada oo aan lahayn ujeedo militari, in si guud oo madax banaan loo xakameeyo si ay ugu adeegto macaamiisheeda.
#Shiinaha casriga ah